Sayniska Ka Dambeeya Soo Bandhigida, Xusuus-qaadka Iyo Soo-Bandhigidda Suuq-geynta | Martech Zone
Suuqleyda ayaa sifiican uga yaqaana qofkasta muhiimadda ay leedahay wada xiriirka wax ku oolka ah. Dadaal kasta oo suuq-geyn ah, ujeeddadu waa inaad farriin ugu dirto dhagaystayaashaada hab iyaga kaqeyb galinaya, oo maskaxda ku haysa, kuna qancineysa inay ficil qaadaan-isla taasna run ayey ku tahay nooc kasta oo bandhig ah. Haddii aad u dhisi lahayd sagxad kooxdaada iibka ah, weydiisashada miisaaniyad maamulka sare, ama inaad horumariso nuxur dhisme caan ah oo loogu talagalay shir weyne, waxaad u baahan tahay inaad mashquuliso, xusuusnaato, oo aad qanciso.
Shaqadeena maalinlaha ah ee Prezi, aniga iyo kooxdaydu waxaan samaynay cilmi baaris badan oo ku saabsan sida loogu gudbiyo macluumaadka qaab awood leh oo wax ku ool ah. Waxaan baranay shaqada saynisyahanada cilmu-nafsiga iyo neerfaha si aan isugu dayno inaan fahano sida maskaxda dadka ushaqeyso. Marka ay soo baxdo, waxaan nahay kuwo adag oo ka jawaabaya noocyada noocyada qaarkood, waxaana jira waxyaabo yar oo fudud oo ay soo-jeediyayaashu sameyn karaan si ay uga faa'iideystaan ​​tan. Waa tan waxa sayniska waa inuu ka yiraahdaa hagaajinta bandhigyadaada:
Jooji isticmaalka dhibcaha rasaasta - kuma haboonayaan habka maskaxdaada rajadu u shaqeyso.
Qof kastaa wuu garanayaa isbadalka dhaqameed: cinwaan cinwaan ah oo ay ku xigto liistada dhibcaha rasaastu. Sayniska ayaa muujiyey in qaabkani, si kastaba ha ahaatee, uu yahay mid aan waxtar badan lahayn, gaar ahaan marka la barbar dhigo qaab muuqaal ah. Baarayaasha kooxda Nielsen Norman Group waxay sameeyeen daraasado badan oo indho indheyn ah si ay u fahmaan sida dadku u cunaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Midkood natiijooyinka muhiimka ah waa in dadku u akhriyaan bogagga shabakadda qaab “F-qaabaysan” Taasi waa, waxay ahmiyada ugu badan siinayaan waxyaabaha ku jira bogga dushiisa oo waxay u akhrinayaan wax ka yar iyo ka yar sadar kasta oo ku xigta markay u wareegayaan bogga. Haddii aan ku dabaqno khariidadan ku-meel-gaadhka ah qaab-dhaqameedka hore - cinwaan ay ku xigto liistada macluumaadka liistada tilmaamaysa - way fududahay in la arko in in badan oo ka mid ah waxyaabaha la akhrin doono.
Waxaa taas ka sii daran, inta dhagaystayaashaadu ay ku dhibtoonayaan inay iskaankaaga iskaanka u dhigaan, ma dhageysan doonaan waxa aad leedahay, maxaa yeelay dadku dhab ahaan ma qaban karaan laba shay hal mar. Sida uu sheegayo MIT neuroscientist Earl Miller, mid ka mid ah khubarada adduunka ee ku kala qaybsanaanta dareenka, “hawlo badan” runtii suurtagal maaha. Markii aan u malayno inaan qabanayno hawlo badan isla waqtigaas, waxaan dhab ahaan u beddeleynaa, garasho ahaan, mid kasta oo ka mid ah hawlahan si deg deg ah-taas oo naga dhigaysa mid ka sii daraysa wax kasta oo aan isku dayeyno inaan sameyno. Natiijo ahaan, haddii dhagaystayaashaadu ay isku dayayaan inay wax akhriyaan iyagoo waliba dhageysanaya, waxay u badan tahay inay kala baxaan oo ay seegaan qaybaha muhiimka ah ee farriintaada.
Marka marka xigta ee aad dhiseysid soo bandhigid, godka qodobbada rasaasta. Taabadalkeed, ku dhaji muuqaalo halkii aad kaheli laheyd qoraalka meelkasta oo suuragal ah, oo xaddid xaddiga macluumaadka bogag kasta oo ah qaddar si fudud uga fudud.
Adeegso sarbeebyo sidaas darteed rajooyinkaagu ma ahan oo keliya inay ka shaqeeyaan macluumaadkaaga - laakiin waaya aragnimo
Qof kastaa wuxuu jecel yahay sheeko wanaagsan oo keenta aragti, dhadhan, ur, iyo taabasho nolosha - waxaana soo baxday inay jirto sabab cilmiyaysan oo tan la xiriirta. Tiro badan waxbarashada waxay ogaadeen in ereyada iyo weedhaha sharaxaya - waxyaabaha sida "cadarka" iyo "waxay lahayd cod xarago leh" - inay xuubsiibiyaan kiliyaha dareemayaasha maskaxdeenna, taas oo mas'uul ka ah garashada waxyaabaha sida dhadhanka, urta, taabashada iyo aragga. Taasi waa, habka ay maskaxdeennu ugu hawlgasho akhriska iyo maqalka khibradaha dareenka waxay la mid tahay sida ay u shaqeyso run ahaantii la kulankooda. Markaad sheegeysid sheekooyin ay ku raran yihiin sawir sharraxaad leh, waxaad tahay, macno ahaan, inaad u keento farriintaada nolosha maskaxda dhagaystayaashaada.
Dhinaca kale, markii la soo bandhigay macluumaad aan sharraxaad lahayn - tusaale ahaan, "Kooxdayada suuq-geynta waxay gaareen dhammaan yoolalka dakhligooda ee Q1," - qaybaha kaliya ee maskaxdeenna firfircoon ayaa ah kuwa ka masuulka ah fahamka luqadda. Halkii khibrad waxa ku jira, si fudud ayaan u nahay processing waxaa.
Isticmaalka sarbeebyada sheekooyinka dhexdooda waa aalad hawlgal ah oo xoog leh maxaa yeelay waxay ku mashquulsan yihiin maskaxda oo dhan. Sawir gacmeedyo muuqaal ah ayaa noloshaada u horseedaya nolol ahaan - macno ahaan - maskaxda dadka dhagaystayaasha ah. Marka xigta ee aad rabto inaad qabato dareenka qolka, isticmaal sarbeebyo muuqda.
Ma dooneysaa inaad xusuus badan yeelato? Ku soo ururi fikradahaaga si ballaadhan, ha ku koobnayn oo keliya mawduucyo.
Miyaad u maleyneysaa inaad xafidi karto amarka laba kaar oo isku shaandheysan oo ka yar shan daqiiqo? Taasi waa sida saxda ee Joshua Foer uu sameeyay markuu ku guulaystay Tartanka Xusuusta Mareykanka 2006. Waxay u muuqan kartaa wax aan macquul aheyn, laakiin wuxuu awooday inuu xafido macluumaad aad u tiro badan waqti aad u gaaban taas oo uu kaashanayo taariikh hore. farsamo soo jirtay tan iyo 80 dhalashadii Ciise ka hor — waana farsamo aad u adeegsan karto si aad bandhigyadaada uga dhigto kuwo aad u xusuus badan.
Farsamadan waxaa lagu magacaabaa "habka loci," oo inta badan loo yaqaan qasriga xusuusta, waxayna ku tiirsan tahay awoodeena dabiiciga ah ee aan ku xasuusano xiriiryada durugsan - meesha ay walxaha ku yaalliin midba midka kale. Awoowayaasheen ugaadhsade-soo-urursade ayaa uxulsaaray xusuus-dhismeedkan awoodda badan malaayiin sano si ay nooga caawiyaan inaan adduunka dhex marno oo aan jidkeenna helno.
Daraasado badan ayaa muujiyay in habka loci-ga uu hagaajiyo xusuusta - tusaale ahaan hal daraasad, dadka caadiga ah ee xafidi kara oo kaliya tiro faro kutiris ah (todobo waa isku celcelis) waxay awoodeen inay xasuustaan ​​ilaa 90 lambar kadib markay farsamada isticmaaleen. Taasi waa horumar ku dhowaad 1200%.
Marka, muxuu habka loci na barayaa abuurista bandhigyo xusuus badan leh? Haddii aad ku hoggaamin kartid dhagaystayaashaada safar muuqaal ah oo muujinaya xiriirka ka dhexeeya fikradahaaga, waxay aad ugu dhowdahay inay xusuustaan ​​farriintaada — maxaa yeelay aad ayey ugu wanaagsan yihiin xusuusashada safarkaas muuqaalka ah marka loo eego xusuusinta liistada rasaasta tilmaamaysa.
Xogta ku qasbaysa kaligeed ma istaageyso - waxay la timid sheeko.
Sheekooyinku waa mid ka mid ah dariiqooyinka aasaasiga ah ee aan carruurta ku barinno adduunka iyo sida loo dhaqmo. Waxaana soo baxday in sheekooyinka ay la mid yihiin kuwa awood badan marka ay timaado gudbinta farriinta dadka waaweyn. Cilmi baaris ayaa mar kale iyo marar badan muujisay in sheekadu tahay mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee looga dhaadhiciyo dadka inay wax qabtaan.
Qaado, tusaale ahaan, daraasad oo uu qabtay borofisar suuqgeyn ka ah Dugsiga Ganacsiga ee Wharton, kaas oo tijaabiyay laba buug-yare oo kala duwan oo loogu talagalay in lagu kaxeeyo deeqaha Sanduuqa Badbaadinta Carruurta. Buug-yaraha koowaad wuxuu ka sheekeeyay sheekada Rokia, oo ah gabar toddobo jir ah oo u dhalatay Mali oo “nolosheeda wax laga beddeli doono” iyadoo lagu deeqayo NGO-yada. Buug-yaraha labaad wuxuu ku taxan yahay xaqiiqooyin iyo tirooyin la xiriira dhibaatada carruurta gaajada ku haysata guud ahaan Afrika - sida xaqiiqda ah “in ka badan 11 milyan oo qof oo Itoobiyaan ah ayaa u baahan gargaar cunno oo degdeg ah.”
Kooxda ka socota Wharton waxay ogaadeen in buug-yaraha ay ku qoran tahay sheekada Rokia uu si aad ah uga badan yahay tabarucaadka kan tirakoobka ka buuxay. Tani waxay umuuqataa mid aan caqiido lahayn-aduunyada maanta xogta kexeysa, go'aan qaadashada ku saleysan 'dareenka caloosha' halkii xaqiiqda iyo tirooyinka inta badan laga xumaado. Laakiin daraasaddan Wharton waxay daaha ka rogtay in xaalado badan, shucuurtu ay waddo go'aamo aad uga badan fikirka gorfeynta. Marka xigta ee aad rabto inaad ku qanciso dhagaystayaashaada inay talaabo qaadaan, tixgeli inaad u sheegto sheeko fariin kuu keenaysa nolosha halkii aad soo bandhigi lahayd xogta kaligaa.
Wadahadalka wadaxaajoodyada buuqa marka laga hadlayo qancinta.
Xirfadleyda suuqgeynta waxay ogyihiin in dhisida waxyaabaha kaqeyb galaya dhagaystayaashaada, kuna dhiiri galinaya inay siila falgalaan, ay ka waxtar badantahay wax si kadis ah loo cuno, hadana isla sidaas ayaa lagu dabaqi karaa dhigeeda suuqa: iibka. Daraasad badan ayaa lagu sameeyay hareeraha qancinta ee ku saabsan soo bandhigida iibka. Kooxda RAIN waxay falanqeeyeen dhaqanka ee xirfadlayaasha iibka ee ka guuleystey 700 B2B fursado, oo ka duwan habdhaqanka kuwa wax iibiya ee kaalinta labaad galay. Cilmi-baaristani waxay shaaca ka qaadday in mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee iibka guuleysta - taas oo ah, qancin qancin ah - ay ku xiran tahay dhagaystayaashaada.
Markii aan eegay tobanka dabeecadood ee ugu sarreeya ee ka soocay iibiyeyaasha qancinta iyo kuwa aan ku guuleysan heshiiska, cilmi-baarayaasha RAIN Group waxay ogaadeen in rajooyinku ay taxeen iskaashi, dhegeysi, fahamka baahiyaha, iyo isku xirka shaqsi ahaan qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Xaqiiqdii, la shaqeynta rajada ayaa ku qoran lambarka labaad ee akhlaaqda ugu muhiimsan marka ay timaado ku guuleysiga garoonka iibka, kaliya ka dib markii la baro himilooyinka fikrado cusub.
Ku farsameynta garoonka sida wada hadalka oo kale - iyo abuurista qaab u oggolaanaya dhagaystayaasha inay ku fariistaan ​​kursiga wadaha markay go’aansanayaan waxa laga hadlayo - waa aaladda muhiimka ah ee wax ku oolka wax ku iibinta. Si guud ahaan, bandhig kasta oo aad iskudayeyso inaad ku qanciso dhagaystayaashaada inay ficil qaadaan, tixgeli inaad qaado wadashaqeyn dheeraad ah haddii aad rabto inaad guuleysato.
Soo Degso Sayniska Soo Bandhigida Waxtarka leh
Tags: dhibcaha rasaastafikirkabandhigyada suuqgeyntatusaalooyinhabka locipreziwaasacFarqiga u dhexeeya mawduucyada